Home News Maxaa ka Jira in Yaxye Cali Hareri laga dhigay Gaashaanle Sare loona...
Maxaa ka Jira in Yaxye Cali Hareri laga dhigay Gaashaanle Sare loona magacaabay Taliyaha Ciidanka Xasilinta Caasimada Muqdisho
Tan iyo markii Xilka R/wasaarenimo loo magacaabay Xassan Cali Kheeyre waxaa soo shaac-baxaayay in shaqsiyaad aan aqoon u laheeyn howlaha ay qabanayaan xilal loo dhiibo taasi oo ugub ku aheed Siyaasadda Soomaaliya ka hor R/wasaare Xassan Cali Kheeyre.
Muqdisho Online ayaa waxaa ay Baaritaan Qota-dheer ku sameeysay Warar soo baxay oo sheegayay in Yaxye Cali Ibraahim (Hareeri) oo dhawaan laga dhigay Gaashaanle Sare loo magacaabay Taliyaha Ciidamada Xasilinta Ee Magaaladda Muqdisho arinkaan oo la yaab iyo Amakaak ku noqday dhamaan inta caqliga u saaxiibka ah.
Su’aalaha ugu horeeya ee la isweeydiinaayo ayaa ah,yaxye waligiis ciidan masoo maray’’Waa maya’’hadaba side looga dhigay Gaashaanle’’Ina Adeerkiis ayaa u gartay’’ Qaabkee u hagi karaa maareeynta Amnigga Caasimadda’’Allaa og’’
R/wasaare Xassan Cali Kheeyre ayaa la xaqiijiyay in uu Yaxye Cali Ibraahim ku amray in uu gacanta ku dhigo Ciidamada xasilinta ee Magaalada Muqdisho taas ayaana sababtay in Yaxye dalbado in Gaashaanle sare laga dhigo.
Sidoo kale waxaan ogaanay in warkaani la shaacin doono dhamaadka Bisha Barakeeysan ee Ramadaan,islamarkaana hada la qorsheeynaayo qaabkii loogu qancin lahaa arinkaan Madaxweyne farmaajo.
Yaxye ayaana wax xirfad ciidan ah laheeyn waxuuna asalkiisii hore dukaan lagu sameeyo Mobile-da ku lahaa Suuqa Xararyaale Ee Degmada Warta-nabadda Asigoo intaasi u dhoofay Dalka Ingariiska ,waxuuna ku lahaa mehrad ganacsi oo Raashinka lagu iibiyo,sanadahii dambe ayuu soomaaliya soo gaaray waxuuna ku biiray Bahda Jaamacadaha,waqtigii dowladii xassan sheikh ayaa loo magacaabay Xog-haaya Joogtada ah Ee Wasaaradda Arimaha Gudaha waxaana xilkaasi ka cirdeeyay Wasiirkii Hore Juxa.
Kheeyre oo diidanaa in uu Saaxada Siyaasadda ka baxo ayaa ka shaqaaleeysiiyay Xafiiskiisa,talaabadaan ayaa cadeeyn u ah in Kheeyre uu mar walbo baalka ku watay Yaxye